DEG DEG:- Xildhibaano dib uga laabtay xarunta ay ka dhaceeyso doorashada madaxweynaha Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Xildhibaano dib uga laabtay xarunta ay ka dhaceeyso doorashada madaxweynaha Soomaaliya
Xidhibaano badan oo ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goordhaw dib uga laabtay xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu wado inay maanta ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaanadaan ayaa la sheegayaa inay ka caroodeen sida ay ula dhaqmeen ciidamada AMISOM ee ilaalada ka haysa xarunta ay doorashada ka dhaceeyso, iyagoona tilmaamay inay u baqeen amnigooda.
Mid ka mid ah xildhibaanada kasoo laabtay xarunta Afisyoone oo wariyaha Bulshoweyn kula kulmay ilinka hore ee xarunta Afisyooni ayaa u sheegay inay ka caroodeen iyagoo xildhibaano ah saf dheer la geliyay islamarkaana lagu dhex daray dad aan garaneyn, taas oo keentay inay u cabsadeen ammaankooda.
Doorashada ayaa qorshaheedii hore ahaa inay bilaabato 9-ka subaxnimo, balse dib u dhac uu ku yimid kadib markii cabasho laga muujiyay in wax isdaba marin lagu kaco.
Guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha ayaa goor sii horeeyso shaaciyay in doorashada ay bilaaban doonto abaarihii 12-ka duhurnimo, si looga dheeraado wal-wal badan ee laga qabo in masuq maasuq iyo wax is-daba-marin ay dhacaan.
Ammaanka goobta ay doorashada ka dhaceeyso ayaa ah mid si aad loo adkeeyay, waxaana la arkayaa xildhibaano badan oo taagan banaanka hore ee xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo safaf dhaadheer la geliyay.